दिनेश गौतम काठमाडौं, ४ वैशाख
काभ्रेमा २ युवामा र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गर्दा पोजेटिभ देखियो । पीसीआरबाट उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।
पेप्सीकोलाको एक आपार्टमेन्टमा ३ जनामा आरडीटी पोजेटिभ आयो भने पीसीआर रिपोर्ट २ जनामा पोजेटिभ, १ जनामा नेगेटिभ देखियो ।
त्यस्तै, बाग्लुङकी १ महिलामा आरडीटी गर्दा पोजिटिभ देखियो तर पीसीआरबाट उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । त्यस्तै, कैलालीमा १ महिलाको आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आयो तर पीसीआरबाट पोजेटिभ देखियो ।
दुईवटा टेस्टबाट फरकफरक रिपोर्ट आएपछि अन्योलता छाएको छ । कुन परीक्षण सही हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ अहिले ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) र रियल टाइम (पीसीआर) विधिबाट परीक्षण गर्दै आएको छ ।
कुन विधिबाट गरेको परीक्षण सही हो ? कुन अवस्थामा पोजेटिभ र नेगेटिभ रिपोर्ट आउँछ ? कस्तो बेलामा आरडीटी गरिन्छ ? अहिले गर्नुपर्ने आरडीटी हो कि पीसीआर ? सरकारले अहिले गरिरहेको परीक्षणले भोलिको दिनमा कस्तो अवस्था आउँछ त ?
यिनै विषयमा हामीले जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पदम सिम्खडासँग कुरा गरेका छौँ ।
उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
पीसीआरको काम भाइरस हेर्ने
कुनै पनि भाइरसका दुईवटा टेस्ट हुन्छन् । एउटा र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) अर्को रियल टाइम (पीसीआर) । कोरोना भाइरसको टेस्ट यी दुवै विधिबाट भइरहेको छ ।
नेपालले पनि अहिले यही विधि अपनाएको छ । तर, नेपालमा जुन रूपमा अहिले आरडीटी गरिएको छ, त्यो गलत हो । कोही मान्छेलाई आज शरीरमा भाइरस छ कि छैन भनेर हेर्ने पीसीआरबाट हो । पीसीआरबाट नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भने शरीरमा भाइरस छैन भन्ने हो । यो मान्छेको स्वाबबाट टेस्ट गरिन्छ ।
आरडीटीको काम एन्टिबडी हेर्ने
मान्छेमा रोगसँग लड्न सक्ने एन्टीबडी छ वा छैन भनेर टेस्ट गर्ने आरडीटी हो । रगतलाई किटमा राखेर यसको परीक्षण गरिन्छ । आरडीटीले मान्छेको शरीरमा कोरोना भाइरस छ/छैन भनेर देखाउँदैन । यसले एन्टीबडी मात्र देखाउँछ । एन्टीबडी पनि २ खालको हुन्छ । इमिनोग्लोबोलिम– एम (आइजीएम) र इमिनोग्लोबोलिम–जी (आईजीजी) हुन्छ । यो शरीरमा उत्पादन भएको छ/छैन भनेर रगतलाई किटमा राखेर परीक्षण गरिन्छ ।
पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ
यदि कसैलाई आज भाइरस लाग्यो भने त्यो भाइरसको सिम्प्टाेम्स ६–७ दिनमा देखिन्छ र १० देखि १४ दिनमा पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आउँछ ।
आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ
तर शरीरमा भाइरस छ भने यो समयमा आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ । यो समयमा एन्टिबडी उत्पादन भएको हुँदैन । शरीरमा एन्टिबडी नभएसम्म आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ ।
दुवै टेस्टमा पोजेटिभ
यदि भाइरस लागेको १२–१५ दिन भएको छ भने त्यो बेलामा दुवै टेस्टमा पोजेटिभ देखिन्छ । यो समयमा शरीरमा एन्टिबडी पनि उत्पादन भएको र भाइरस पनि भएकाले दुवै टेस्टबाट रिपोर्ट पोजेटिभ आउने हो ।
भाइरस लागेको ३–४ हप्ता भएको छ र रोग निको भएको छ भने त्यो समयमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ । पीसीआरले भाइरस छ छैन भनेर हेर्ने हो । निको भएपछि शरीरमा भाइरस नभएकाले रिपोर्ट नेगेटिभ आउने हो ।
तर, रोग निको भएपछि पनि आरडीटी रिपोर्ट भने पोजेटिभ आउँछ । ३–४ हप्तादेखि रोगसँग लड्ने एन्टिबडी उत्पादन हुने भएकाले रिपोर्ट पोजेटिभ आउने हो । यसको मतलब भाइरस शरीरमा छ भन्ने होइन । एन्टिबडी उत्पादन भएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्षौंसम्म पनि रहन सक्छ । यो रिपोर्ट पोजेटिभ आउँदैमा डराउनुपर्ने हुँदैन ।
आरडीटीको काम के हो त ?
हिजो कुनै मान्छेलाई भाइरस लागेको थियो वा थिएन भनेर हेर्ने हो । वा रोग लागिसक्यो, अब रोगसँग लड्न सक्ने एन्टिबडी विकास भएको छ वा छैन भनेर हेर्ने हो । नेपालमा भर्खर भाइरस देखिन थालेको छ । अब हिजो भाइरस थियो थिएन भनेर अहिले हेर्नुको के अर्थ ? अहिले त भाइरस छ वा छैन भनेर परीक्षण गरिनुपर्छ । त्यो परीक्षण गर्ने भनेको पीसीआरबाट हो ।
समुदायका लागि आरडीटी
कुनै समुदायमा भाइरस लागेको थियो थिएन ? कति संख्यालाई लागेको थियो ? कतिलाई लाग्ने सम्भावना छ ? भनेर सर्भे गर्नका लागि आरडीटी काम लाग्छ ।
संक्रमण देखिएको सुरुमा भन्दा पनि केही समय वा १ वर्षपछि यो परीक्षण गर्न सकिन्छ । यदि कुनै समुदायमा आरडीटी गर्दा कसैलाई पोजेटिभ देखियो भने त्यसको अर्थ त्यो मान्छेलाई पहिला भाइरस थियो भन्ने हो । पहिला भाइरस एक्टिभ हुँदा उनीहरूको शरीरबाट अरुलाई सरेको छ भने के हुन्छ ?
अब त्यो समुदायका मान्छेलाई आरडीटी होइन, पीसीआरको प्रयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र अरुलाई भाइरस सरेको छ छैन थाहा हुन्छ ।
सुरुवातमै नेगेटिभ आएमा ढुक्क हुने अवस्था छैन
जहाँ रोग नै सुरु भएको छैन । त्यहाँ आरडीटी टेस्टकाे के अर्थ ? भर्खर शरीरमा भाइरस लाग्न थालेको छ भने आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ । त्यसैले रोग छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन, त्यसका लागि पीसीआर नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तै : पेप्सीकोलाको एक अपाटर्टमेन्टमा ३ जनाको आरडीटी रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । त्यसपछि त्यहाँ भएका ५–६ सय परिवारलाई आरडीटी गरियो । रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । यदि ती मान्छेसँग भाइरस सरेको रहेछ भने के हुन्छ ? एन्टिबडी हेर्ने हो कि भाइरस ? अपार्टमेन्टमा एन्टिबडी होइन, अहिले भाइरस छ/छैन परीक्षण हुनुपर्छ । आरटीडी रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भनेर ढुक्क हुन मिल्दैन ।
ती ३ जनामा पीसीआर गर्दा २ जनामा पोजेटिभ देखियो, १ जनामा नेगेटिभ आयो । यसको अर्थ २ जनामा एन्टिबडी र भाइरस दुवै थियो । त्यसैले यो केसमा दुवै टेस्टको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । र, १ जनामा पहिले भाइरस थियो । अहिले निको भएर एन्टिबडी मात्र देखाएको हो । त्यसैले आरडीटी पोजेटिभ र पीसीआर नेगेटिभ आएको हो ।
मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड
अहिले जसरी परीक्षण भइरहेको छ, यो ठीक उल्टो भएको छ । हिजो रोग थियो थिएन भनेर अहिले परीक्षण गर्ने समय होइन । आज भर्खर रोग सुरु भएको छ ।
वर्षौं दिनपछि गर्ने परीक्षण आज गरेर मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ । परीक्षणका लागि चीनबाट त्यति धेरै किट ल्याइएको छ । आरडीटीले भाइरस डिटेक्ट गर्दैन । भाइरस एक्टिभ छ/छैन भनेर देखाउने पीसीआरले हो । त्यसैले किटको सट्टा अहिले पीसीआर मेसिन धेरै ल्याउनुपर्ने हो ।
आरडीटी र पीसीआर भनेर मान्छेलाई झुक्याउने काम भएको छ । त्यही भएर डब्लूएचओले परीक्षण परीक्षण ... भनिरहेको छ । त्यो परीक्षण भनेको पीसीआरबाट गर्ने हो ।
डाक्टर, नर्स, अस्पताल, पीसीआर, भेन्टिलेटर धेरै भएका युरोप, अमेरिका, चीनजस्ता देशलाई रोग नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । स्रोत साधन नभएको नेपालजस्तो देशमा यदि त्यसैगरी फैलियो भने के हुन्छ ?
यसलाई सुरुमै नियन्त्रण गर्ने हो भने पीसीआरबाट गरिने परीक्षणलाई बढाउनुपर्छ । यदि आरडीटी गर्दै छोड्दै गरियाे भने नेपालमा पनि भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ४, २०७७, १५:५८:००
#कोरोना भाइरस #काेराेना त्रास
कोरोनाको नाममा कहिल्यै नबल्ने गरी निभ्योे दियो